7 Billood jir - Somali Kidshealth
Ilmaha gaaray bisha todobaad waxay noqonayaan kuwo darreemaya isku-filaansho oo diyaarinaya shaqsiyadooda u gaarka ah. Dhallaanku bishaan waxay bilaabaan inay dhaqdhaqaaqaan. Waxay sameeyaan inay guurguurtaan, inay xamaartaan, inay dhinacyada isku rogaan amaba inay salka ku siqaan. Mararka qaar ilmuhu afartaas dhaqaaqba way isku daraan.
Ilmaha guurguuranaya waxaa wanaagsan in lagu dhiirigaliyo inuu dhaqdhaqaaqo iyadoo hortooda la dhigayo boombalo si ay u haabtaan oo u gaaraan meesha boombaladu taal. Waxaa la soo gaaray markii waalidiintu guriga ka nadiifin lahaayeen wax kasta oo khatar ku ah ilmaha sida biraha wax sara, waxyaalaha ilmuhu liqi karaan, waxyaalaha gubniinka keeni kara iyo dareerayaasha khatarta ah.
Photo courtsey of whattoexpect.com
Ilmaha gaaray 7 billood jir waxay awoodaan inay wax cunni karaan, inay qaadada gacanta ku qabsan karaan, kuwa caba masaasada inay iyagu qabsan karaan koobka wax lagu siinayo. Waxaa kale oo ilmuhu awoodaan in la istaajin karo cabaar iyadoo la caawinayo. Jimicsigaani wuxuu u fiican yahay inay dhismaan murqaha lugaha ee sababa in ilmuhu socod bilaabo.
Inta u dhaxaysa bisha shanaad ilaa todobaad waxaa ilmaha u soo baxa ilkaha ugu horeeya. Marka ilkuhu soo baxaan waxaa lagu gartaa in ilmuhu yeesho cay badan oo afkiisa ka soo dareera. Waxaa kale oo ilkaha soo baxayaa ilmaha ku keenaan qaylo, xanaaq iyo oohin ka imaanaysa xannuun ilkaha oo ciridka ka soo dusaya.
Bisha todobaad ilmaha jira waxaa loo bilaabi karaa cuntooyin kale oo ka duwan mushaalidii. Waxaa lagu bilaabi karaa khudrad la shiiday. Markasta oo cunto cusub aad ku bilowdo tijaabi muddo 3 beri ah in ilmahu cuntadii aad siisay ay xasaasiyad ku keentay iyo in kale sida matag, shuban, iyo nabro. Laga bilaabo bishaan ilmaha yar fariisi gogosha ama miiska qoysku cuntada ku wada cuno.
Carruurta 7 billood jirka ahi hadda luuqada iyo shacuurta way fahmi karaan. Waxay kala garan karaan hadalka cannaanta ah ama amaanta ah. Haddii aad ku tiraahdo “Maya” waxaa laga yaabaa inay ku fahmaan inaadan faraxsanayn. Ugu yaraan hadda haddii aad magacooda ugu yeerto way kuu soo jeesanayaan. Bishaan carruurta yar yari waxay jecel yihiin ciyaarta iyo in la maaweeliyo.
Xilligaan xasuusta maskaxda ilmuhu si wayn bay u korortay, waayo horay haddii aad shay ama boombalo uga qarin jirtay waxay dareemi jireen ilmuhu in sidaas uu shaygaasi ku tagay, laakiin hadda waxay dareemayaan in ashyaadii ama dadkii ka tagayba ay soo noqon doonaan. Waxaa laga yaabaa meeshii boombalada aad gogosha kaga qarisay inay ka baaraan.
Bishaan waxaa soo kordha wax la yiraahdo Welwelka kala-dheeraanta ama “separation anxiety” oo ah in ilmuhu kugu dhego ama uu ooyo marka uu dareemo inaad tagayso. Cilladaani waa dabiici waxayna socotaa ilaa ilmuhu ka gaarayo sanadka labaad. Marka aad ka tagayso ilmaha ku beeg mar ilmuhu uu hurdo ama aad markaas quudisay. Isku day inaad soo koobto macasalaamada, ka codso qofka ku caawinaya inuu ilmaha ku maaweeliyo boombalo ama buug.
Ha darrreemin wax eed ah haddii ilmuhu si kulul u ooyo, waayo daqiiqado ka dib ilmuhu wuu aamusayaa oo caadi buu noqonayaa.
Waxaa kale oo iyaduna laga yaabaa inay soo kororto qallada ilmaha oo ah haddii uu qof cusub yimaado xaafada in ilmuhu ka cabsado oo uu ka qalloodo.
nextSoo bixida ilkaha ee Carruurta